Si Thu Mobile and Computer Sale/Service: MMC Storage Mode 9006 ကို QPST Software မသုံးပဲ One Click ဖြင့် ၀င်နည်း (အပိုင်း - ၁)
MMC Storage Mode 9006 ကို QPST Software မသုံးပဲ One Click ဖြင့် ၀င်နည်း (အပိုင်း - ၁)
အသုံးပြုနိုင်သော Model များ , G6 C00, G6 U00, G630 U00, Y610 U00, C8816, C8816D, G730 U30, G615 U10 နှင့် CPU MSM 8x12 သုံးထားသော ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
MMC Storage ၀င်နည်းသိရင် ဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ
Firmware တင်ရင်အဖြစ်များတဲ့ Step2Fail Error, Logo Stop Error, Deadboot Error, NotiBar Error, write data Error, အစရှိတဲ့ Error တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပါ အဓိကကတော့ DeadBoot Error ပါပဲ ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာအဖြစ်များနေကြပါတယ် ဒီအခြေအနေမှာ BoardFirmware ကိုပဲအားကိုးနေကြရတယ် MMC Storage 9006 Mode ၀င်နည်းသိထားရင် Board Firmware မလိုတော့ပါ
BoardFirmware တင်တာနဲ့ MMC Storage Mode ၀င်ပြီး Firmware တင်နဲ့ ဘာတွေကွာလဲ
BoardFirmware တင်ရင် ဖြစ်တက်သော Error များကတော့ IMEI0Error, Notification Panel Error, Boot Logo Error, Power Restart Error အစရှိသော Error များဖြစ်တက်ပါတယ်
MMC Storage Mode 9006 ၀င်ပြီး Firmware ရေးရင်တော့ Error လုံးဝကင်းရှင်းပါတယ်
MMC Storage Mode 9006 ၀င်နည်းတွေ အများကြီးထဲကမှ အလွယ်ဆုံး One Click ဖြင့် ၀င်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်
MMC Storage Mode 9006 ၀င်နည်း
1. MMC Storage ၀င်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ဖိုင်များအရင်ဒေါင်းပါ
2. MMC Storage Mode 9006 ၀င် ဖို့ QDLoader 9008 Mode ကိုအရင်ဝင်ပါ
3. Phone က Firmware တက်နေသေးတယ်ဆိုရင် Nomal Mode မှာ adb reboot edl ရိုက်ပြီးဝင်ပါ
Firmware မတက်တော့ဘူး Logo လည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ TestPoint ထောက်ပြီးဝင်ပါ TestPoint မထောက်တက်ဘူးဆိုရင် Mi ကထုတ်တဲ့ Xiaomi qualcomm Jig လေးဝယ်ပြီး ၀င်လို့ရပါတယ်
4. 9006 Mode ရောက်ပြီးဆိုရင် အထက်ကဒေါင်းထားတဲ့အထဲက MMC Storage Mode change TOOL Folder ထဲက QPBLFBML01.exe ကို Run ပါ QPBLFBML01.exe Software က window764bit, window 8 64bit, window 10 64bit မှာ Error တက်ပါတယ် Error မတက်ချင်လျင် Microsoft C++ Software သွင်းပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်
5. QPBLFBML01.exe ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် Maufacture ရွေးပြီး Next နိုပ်ပါ ပြီးရင် Firmware ဖိုင်ခေါ်ပါ New Password မှာ 123 ရိုက်ပါ Download ဆွဲထားတဲ့ folder ထဲက MSM8x10 Folder အောက်က MSM8610V100R001C00B001.xml ဖိုင်လေးကို Click ပြီး Open နိုပ်ပါ ပြီးရင် Next နိုပ်ပါ Scan&Download ကိုဆက်နိုပ်ပါ
6. Phone မှာ QDLoader 9008 Mode ၀င်ပြီးသား ဆိုရင် 1% ဆိုပြီး စRun နေပါလိမ့်မည် 40% ရောက်လျင် Reboot Device ဆိုပြီး MMC Storage Mode 9006 ကိုရောက်သွားပါပြီ
7. Device Manager မှာ Qualcomm HS-USB Diagnositcs 9006 ပေါ်နေလျင် MMC Storage Mode ၀င်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ
အပိုင်း - ၂ မှာ Qualcomm Firmware ADB Backup , MMC Storage 9006 Mode မှာ Firmware တင်နည်းများ တင်ပေးပါအုန်းမည်
09 259484046 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
Posted by အောင်သူရ at 7:46 PM
Search This My Website